III. Ireo fanontaniana tokony hapetraka – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Hita soritra ve ireo fahasahiranana eto am-panatanterahana azy?
Inona avy ireo fahasahiranana ireo?
c) Ahoana ireo fomba hanapariahana ny fampianaran’ny Fiangonana ao anatin’ny fandaharan’asa pastôraly eo amin’ny sehatra firenena, eo amin’ny sehatra diosezy, eo amin’ny sehatra paroasy?
Inona no fandalinam-pinoana momba ny fianakaviana?
d) Fomba ahoana ary amin’ny lafiny inona ny fampianaran’ny Fiangonana no fantatra na raisina na lavina na kianina eo amin’ireo sehatra ivelan’ny fiangonana?
Inona avy ireo lafiny ara-kolontsaina manakana ny tena handraisana ny fampianaran’ny Fiangonana momba ny fianakaviana?
2. Momba ny fanambadiana manaraka ny lalàna sy zo voajanahary
a) Ahoana no mety anjara toeran’ny zo sy lalàna voajanahary eo amin’ny fiainan’ny olompirenena andavanandro any amin’ny rafitra isan-karazany any, eo amin’ny sehatry ny fanabeazana, any amin’ny sehatry ny akademia any, hatrao anivon’ny fiainam-bahoaka?
Inona no fototra antropolojika mifamoivoy eny anivon’ireny adihevitra momba ny fiforonan’ny fianakaviana ireny?
b) Ny fiheverana avy amin’ny hoe lalàna sy zo voajanahary eo amin’ny firaisan’ny lehilahy sy ny vehivavy ve eken’ny vita batemy fotsiny amin’iizao araka izany?
c) Eo amin’ny andavanandrom-piainana, ahoana no fomba handavan’ny olona ny zo sy ny lalàna voajanahary momba ny firaisan’ny lehilahy sy ny vehivavy ahafahany miroso amin’ny fanambadiana?
Misy fomba ary ahoana no fomba andalinana an’izany eo amin’ny sehatry ny fanjakana sy eo amin’ny sehatry ny fiangonana?
d) Raha toa ka misy vita batemy kanefa tsy mpivavaka na mitonona ho tsy mpino no mangataka ny fankalazana ny fanambadiany, inona ary ahoana ny fanamby pastôraly hiatrehana an’izany?
3. Ny Pastôraly momba ny fianakaviana ary ny pastôraly atrehin’ny fianakaviana eo anivon’ny tontolon’ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly.
a) Tato anatin’ireto folo taona farany ireto, inona avy ireo traik’efa pastôraly teo amin’ny fanomanana amin’ny fanambadiana?
Nanao ahoana ny fomba nanaitairana ny adidy hahatonga ny mpivady sy ny fianakaviana ho mpitory ny Vaovao Mahafaly?
Nanao ahoana ny fomba namohazana ny « kônsiansin’ny fianakaviana » hahatsiaro sy hiaina fa fiangonana kely ao an-tokantrano izy?
b) Afaka manolotra fomba fivavahana eo anivon’ny fianakaviana mahatohitra ny hasarotry ny fiainana ankehitriny miaraka amin’ireo kolon-tsaina manahirana entiny?
c) Ahoana ny fomba hiatrehan’ny fianakaviana kristianina ny fikorontanam-be na fifandonana mihitsy eo amin’ny taranaka mifandimby ankehitriny amin’ny maha-kristianina azy?
Ahoana ny fomba entiny mamaly ny fiantsoan’Andriamanitra azy indrindra amin’ny fampitàna ny finoana?
d) Ahoana no fomba ahafahan’ny fiangonana eo an-toerana sy ireo fikambanana masina momba ny fianakaviana manolotra fandaharam-panabeazana azo alaina ho ohatra?
e) Inona re no mety ho tolotra manokana omen’ny mpivady sy ny fianakaviana azony omena mba hitarafana an’izany atao hoe mpivady sy fianakaviana to teny ankehitriny?
f) Inona re no fiahina pastôraly manokana atolotry ny Fiangonana ho an’ireo miomana ho mpivady sy ho an’ireo mpivady mikorontana?
4. Momba ny pastôraly mba hiatrehana an’ireo toe-java-manahirana misedra ny fianakaviana.
a) Tena zava-misy pastôraly eo aminareo ve ny fampirafesana?
Manao ahoana ny tahany arak’isa?
b) Moa misy ve ny tokantranomaso tsy misy na tsy mitady fankatoavana na ara-panjakana na ara-piangonana?
Manana tarehimarika azo antoka ve ianareo?
c) Zava-misy pastôraly eo aminareo ve ny fisian’ireo nisara-panambadiana sy ireo nanambady hafa rahefa nisara-panambadiana?
Ahoana ny fandaharan’asa pastôraly hiatrehanareo izany?
d) Eo anatrehan’izany rehetra izany ahoana no fomba hiainan’ny kristianina an’izany toe-javatra tsy ara-dalàna izany?
Mahatsiaro tena amin’izany ve izy?
Mampiseho tsy fivakiana loha amin’izany ve izy?
Mahatsiaro ny tenany ho voahilikilika ve izy?
Mahatsiaro mijaly noho ny tsy fahafahany mandray sakramenta?
e) Inona avy ny fangatahana ataon’ireo nisara-panambadiana kanefa nanambady hafa indray amin’ny fiangonana momba ny sakramentan’ny Eokaristia sy ny Fampihavanana?
Amin’ireo ao anatin’ny toe-javatra toy izany, firy no mangataka an’ireo sakramenta ireo?
f) Ny fanamorana ny fanarahana ny lalàm-piangonana (droit canon) momba ny hankatoavana ny mahafoana ny fatoram-panambadiana ve dia tena hitondra fanafody ho an’ireo olona voakasik’izany?
Raha eny, amin’ny fomba ahoana?
g) Misy fomba pastôraly ve ahafahana mikarakara ny tranga toy itony?
Ahoana no mety ho fitrangan’izay asa pastôraly izay?
Misy fandaharan’asa momba izany ve eo amin’ny sehatra diosezanina sy eo amin’ny sehatra firenena?
Nanao ahona ny fomba fitoriana na nitoriana ny famindràm-pon’Andriamanitra tamin’ireo olona nisara-panambadiana sy ireo nisara-panambadiana nefa nanambady indray?
Ahoana ny fomba hanohanan’ny Fiangonana ny làlam-pinoana izorany mba hasehony amin’ny asany?
5. Momba ny firaisan’ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy.
a) Misy lalàm-panjakana mankato ny firaisan’ny lahy samy lahy na vavy samy vavy hitovy lenta amin’ny fanambadiana?
b) Manao ahoana ny fihetsiky ny Fiangonana samihafa sy ny Fiangonana eo an-toerana mahita ny olona voakasik’ireny ary koa ny olona na fahefa-panjakana manohana na mapiroborobo an’izany?
c) Fiahiana pastôraly manao ahoana no tokony hotànana manoloana ny olona nisafidy ny làlam-piainana toy ireny?
d) Rahefa tojo ny firaisan’ny lahy samy lahy na vavy samy vavy ka nanangan-jaza izy, fihetsika pastôraly manao ahoana no hijoroana raha toa ka ny hampitàna ny finoana no kendrena?
6. Momba ny fanabeazana ny ankizy eo anivon’ireo fanambadiana tsy ara-dalàna.
a) Manao ahoana eo ho eo ny tahan’ireo ankizy sy zatovo miaina eo anivon’ny fanambadiana toy izany raha oharina amin’ireo teraka sy nobeazina tao anatin’ny fianakaviana miorina araka ny fanambadiana ara-dalàna?
b) Toe-po amam-panahy manao ahoana no hivatanan’ny ray aman-dreny amin’ny Fiangonana?
Inona no angatahiny?
Ny sakramenta fotsiny ve sa ny fandalinam-pinoana ihany koa?
c) Ahoana no fomba entin’ny Fiangonana mamaly ny hetahetan’ireo ray aman-dreny ho an’ny zanany mba anomezana ho azy ireo fanabeazana kristianina?
d) Ahoana no fizotry ny fitantanana ny sakramenta amin’izany: ny fanomanana, ny ny fanomezana sakramenta ary ny fiarahana mizotra hiaina azy avy eo?
7. Momba ny fisokafan’ny mpivady handray ny aina.
a) Inona no fahalalana mivaingana fantatry ny kristianina momba ny foto-pampianaram-pinoana voalaza ao amin’ny Humanae vitae momba ny maha ray aman-dreny tompon’andraikitra?
Ahoana no fahatsapan’ny olona ny lanja ara-môralin’ireo fomba fandrindram-piterahana?
Inona no mety ho fandalinana azo atao eo amin’ny lafiny fiahiana ny vahoakan’Andriamanitra?
b) Eken’ny olona ve io foto-pampianarana amin’ny fitsipi-pitondran-tena io?
Inona avy ireo lafin-kevitra mbola mametraka olana ny amin’io mahatonga ny fanaikena azy mbola mananosarotra ho an’ny ankamaroan’ny mpivady?
c) Inona avy ireo fomba voajanahary hampiroboroboin’ny Fiangonana aty an-toerana mba hampiharana izay voalaza ao amin’ny Humanae vitae ka hanampiana ny mpivady?
d) Inona avy ireo traik’efa momba io lohahevitra io ao anatin’ny fitantanana ny sakramentan’ny fampihavanana sy ny fandraisana anjara amin’ny Eokaristia?
e) Inona avy ireo fifanoheran-kevitra mety ho hita eo amin’ny fampianaran’Fiangonana sy ny fanabeazana ho olom-pirenena ?
f) Ahoana no ho fomba hampiroboroboana ny toe-po amam-panahy misokatra amin’ny fiterahana ?
Ahoana no anomezana vahana an’izay hitomboan’ny fahaterahana?
8. Momba ny fifandraisana eo amin’ny fianakaviana sy ny olona.
a) Nanambara ny mistery momba ny olombelona sy ny fiantsoana iantsoana azy i Jesoa-Kristy, ho toerana soa voatokana ho an’ny fampiaviana an’izany ve ny fianakaviana?
b) Inona avy ireo mety ho sakantsakana ho an’ny fianakaviana tsy mamela ny olona tsirairay hihaona amin’i Kristy?
c) Amin’ny fomba ahoana ny fahasahiranana eo amin’ny finoana na fahaverezany koa no ahitana fiantraikany eo amin’ny fiainam-pianakaviana?
9. Ireo fanamby hafa sy tolo-kevitra samihafa.
Momba ireo lohahevitra voadinika tato amin’ireto fanontaniana ireto, moa ve mbola misy fanamby hafa sy tolo-kevitra hafa maika na ilaina?